Mihena matetika matetika | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Mihabetsaka ny hafanana
Induction ny fiorenan'ny fitomboka
Ny fametrahana ny fametrahana ny fanamafisana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fantsom-pitaronana IGBT
Tanjona: manafana trano fonenana solika aliminioma misy habe 8 ″ x 4 1/2 ″ x 3 1/2 3750 ka hatramin'ny 1.5F, mamela ireo faritra vy ampidirina. Mafana mandritra ny adiny iray mahery izao ny trano ao anaty lafaoro iray. Ireo faritra izay asiana faritra vy dia refesina 0.6875 ″ sy 3750 ″ ny savaivony. Ho fanampin'izay, maharitra mandritra ny iray minitra mahery ny fizotry ny fampidirana, ka XNUMXF no tokony hotanana a
potoana hamitana ny dingana.
Fitaovana: Trano paompy alimina mitafy 8 ″ x 4 1/2 ″ x 3 1/2 ″
Votoatin'ny fanisiana vy.
Fampiharana: Tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny DW-HF- 25, ny famokarana herinaratra fampidirana fanjakana 25 kW dia vokatr'ireto manaraka ireto dia tratra.
- 3750F dia tratra tao anatin'ny iray (1) minitra hahafahana miditra.
- Trano 20 nohafanaina tamim-pahombiazana tamin'ny fampiasana coil pancake avanana 5 (XNUMX).
Fitaovana: Ameritherm SP 25, 25 kW famoahana herinaratra fampidirana fanjakana henjana ao anatin'izany ny tobim-pahanginana lavitra iray (1) misy capacitor efatra (4) mitotaly 1.0 μF, ary coil pancake avanana havanana dimy (5) vita amin'ny varahina 3/16 ″ fantsona.
Sokajy Technologies Tags Mihabetsaka ny hafanana, Firafitra, Manisika, mihena